Author Topic: Sushma Karki - model and actress (Read 170657 times)
Re: Sushma Karki - OOPS moment - panties show!
« Reply #30 on: June 16, 2012, 01:11:44 AM »
मेरो चरित्र हत्या गरियो : शुष्मा कार्की
सार्वजनिक गरिएको पब्लिसिटी पोष्टरबाट आफ्नो चरित्र हत्या भएको भन्दै हिरोईन शुष्मा कार्कीले फिल्म विन्दासको नाम समेत नलिने भएकी छिन् । हेर्दा ज्यादा भल्गर देखिने प्रकृतिको विन्दासको पब्लिसिटी पोष्टरलाई बिहिबार फिल्मीखबरले प्रश्न सहित समाचारको रुपमा सार्वजनिक गरेपछी शुष्माले आफ्नो ध्यानकर्षण भएको भन्दै निर्देशक विरुद्ध कारबाहीको प्रक्रिया पनि अघि बढाउने बताएकी छिन् ।
शुष्माले भनिन्, 'फोटो सुट गरिएको हो तर कम्प्यूटरबाट फोटो भल्गर बनाउदै पब्लिश गरिएकाले मेरो आपत्ती छ ।' यस्तै सुष्माले आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने निर्देशक राजु गिरीसँग आउदा दिनमा सँगै काम समेत नगर्ने बताएकी छिन् । उनले भनिन्, 'यसरी अर्काको जिवननै बर्वाद हुनेगरी काम गर्नेको के विश्वास गर्नु ? त्यसैले अब म यो फिल्मको डबिङ पनि गर्दिन र उहाँसंग आउदो दिनमा कुनै पनि काम गर्ने छैन ।'
उता निर्देशक गिरीले फिल्म भल्गर नभएको र सुष्माको चरित्र हत्या नगरिएको बताए । उनले भने, 'त्यो फोटो जस्तो खिचिएको हो त्यस्तै राखिएको छ त्यसैले सुष्माजीले यो बिषयमा आपत्ती जनाउनु हुन्छ र डबिङ गर्नुहुन्न भने एग्रीमेन्ट अनुरुप कलाकार संघ मार्फत कानुनी प्रक्रियामा अघि बढ्ने छौ ।' गिरीले फिल्म भित्र केही दृश्य उत्तेजक शैलीमा खिचिए पनि सालिन शैलीको ग्ल्यामर दृश्य मात्रै फिल्ममा राखिने बताए । उनले भने, 'दर्शकले जति पचाउछ त्यो बाहेक अरु राखिने छैन र खिचिएको पनि छैन । मलाई विन्दास मात्रै चलाउनु छैन किन कि मेरा अरु पनि फिल्म लाईनमा छन् तसर्थ म के भन्छु भने शुष्माजीले अरु कसैको भड्काउमा लागेर यस्तो भन्नु भएको हो ।'
यध्यपी गिरीले शुक्रबार बिहान ९ बजे सुष्मासंग यो विवादित बिषयमा छलफल गरेर अघि बढ्ने बताएका छन् । तर सो मिटिङमा सुष्मा जान्छिन् वा जादिनन् त्यो भने फाईनल भईसकेको छैन ।
« Reply #31 on: June 16, 2012, 03:22:37 AM »
« Reply #32 on: August 25, 2012, 02:16:16 AM »
नेपाली समाज यौनका सम्बन्धमा कुण्ठित छ। कतिपय मनोविश्लेषक भन्छन्, 'नेपालीहरू बाहिरी दुनियाँसँग यौनका विषयमा छिःछिः र दुर-दुर गर्छन्, भित्र भने यौनबाहेक केही सोच्दैनन्।' यो कुरा नायिका सुष्मा कार्कीलाई पनि लाग्न थालेको छ। केही समययता नेपाली चलचित्रकी हट नायिकाको सूचीमा दरिएकी सुष्माका जति पनि समाचार बने, संयोगवश ती सबै यौनकै वरिपरि थिए। उनी पनि के कम, आफ्ना शुभचिन्तकहरू जे चाहन्छन् उनी त्यो पूरा गर्न पछि पर्दिनन्। मेरो एउटा साथी छ र केही म्युजिक भिडियोबाट रजतपटमा देखिएकी हट सुष्माले अश्विनी कोइरालासँग बाहिरी दुनियाँका विषयमा त बोलिन् नै, आफ्ना केही आन्तरिक रहस्य पनि खोलिदिइन्।
सुष्मा कार्की राम्री कि हट ?
आफ्ना बारेमा के कमेन्ट गरौं, त्यो त अरूले गर्ने हो।
दर्शकका लागि हट, मलाई चिन्नेहरूका लागि चुलबुली प्यारी सुष्मा।
यसरी दोहोरो चरित्र निर्वाह गर्न पाइन्छ त ?
कला मेरो प्यासन हो। मलाई दर्शकहरूले जुन रूपमा हेर्न चाहनुहुन्छ, त्यो मैले दिनैपर्छ।
बेडसिन पनि ?
किन यति सार्होि खुलेको ?
बाहिर जति सार्होि हल्ला छ, त्यति सार्होल चाहिँ होइनन्। यस्ता हल्ला कहिले पत्रकारहरूले चलाइदिन्छन्, कहिले म आफैं चलाउँछु।
पत्रिकालाई केही न केही त मसला चाहियो, पत्रकारले 'लहै सुष्मा, तिम्रा बारेमा म यस्तो लेख्दैछु' भन्नुहुन्छ। मेरो नाइँ भन्ने बानी छैन। त्यसैले छापिन्छ। कहिलेकाहीँ आफ्ना बारेमा पत्रिकामा नयाँ कुरा आओस् भनेरै आफैं गसिपका विषय दिन्छु।
कहिले अधर चुम्बन, कहिले बेडसिन कहिले निर्देशकसँगको खटपटजस्ता विवाद आउनुको कारण यही हो ?
हुँदै नभएको कुरा त आउने होइनन्। कहिलेकाहीँ थोरै बढाइचढाइ हुन्छ, त्यति हो।
फरक पहिचान बनाउन यसो गरेको हो ?
समयको माग भएर।
कहिलेकाहीँ आवश्यकताभन्दा बढी चर्चा भयो भन्ने लाग्दैन ?
जब मान्छेहरूले मलाई नेगेटिभ रूपमा हेर्छन्, त्यो बेला लाग्छ।
कस्तो नेगेटिभ ?
सबै हिरोइन पैसा लिएर सेक्स गर्छन्, सबैको कसै न कसैसँग सेक्स भिडियो बनेको छ भनेर सोच्ने दर्शकहरू धेरै रहेछन्। यस्ता कुरा मनमा राख्ने मान्छेको कमेन्ट सुन्दाचाहिँ शुद्ध कलाकार भएर बाँच्न गाह्रो छ भन्ने लाग्छ।
त्यस्तो कुनै फ्यान, जसले सबैभन्दा पीडादायी कुरा गर्योु ?
एकपटक मध्यरातमा फोन आयो। म मस्त निद्रामा थिएँ। पहिलो पटक सायद उठाउन सकिन। फोन उठाएपछि उसले राम्रो कुरा गर्योन। कुरा गर्दै जाँदा 'म तिमीलाई एक रातको १ लाख रुपैयाँ दिन्छु, प्लिज' भन्न थाल्यो। अनि त मेरो होस हवास उड्यो। त्यसअघि फेसबुकमा दुई लाखको अफर आएको थियो।
त्यस्ता नकारात्मक फोन वा सार्वजनिक टिप्पणीका बारेमा तपाईंको धारणा के छ ?
१-२ लाख सानो रकम होइन। आखिर सुष्मामा केही त छ, जसले मान्छेलाई आकषिर्त गरिरहेको छ। उहाँहरू सबै मेरा फ्यान नै हो भन्ने लाग्छ। यत्ति हो, उहाँले मेरो आकर्षणलाई प्रेममा होइन, सेक्सका रूपमा लिनुभयो। पर्दा वा पत्रिकाका पानामा देखिने बोल्ड क्यारेक्टर यथार्थमा त्यस्ता हुँदैनन् भन्ने कुरा उहाँहरूले नबुझ्नु भएको हो।
वक्षस्थलमा टाटु खोपाउनुभएको छ, अनि त्यसलाई राम्रैसँग प्रदर्शन गर्नुहुन्छ, त्यसैले पो हो कि ?
त्यो टाटुमा गुलाफको फूल पनि छ। त्यो पनि त हेर्नुपर्यो् नि।
के हो त्यसको अर्थ ?
म हट छु, तर गुलाफको फूलजस्तै कोमल।
सूर्यको तातोसँग गुलाफको फूल त्यसै पनि ओइलिनु पर्ने, होइन र ?
अलि विरोधाभास लाग्न सक्छ। टाटु बनाउने बेलामा मैले म बाहिर सूर्यजस्तै र भित्र गुलाफजस्तै छु भन्न खोजेकी थिएँ। बुझाइ मान्छेपिच्छे फरक हुँदो रहेछ।
तपाईंले आफ्नो वक्षस्थललाई नै किन यति महत्व दिनुभएको ?
वक्षस्थल मेरो सेक्स सिम्बोल मात्र हो। मलाई त आफ्ना ओठ र आँखा मन पर्छन्।
कलाकारितामा कहाँसम्म पुग्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
केही प्रयास गर्नुभयो कि सपना मात्रै हो ?
प्रयास गरिरहेकी छु। हिन्दी सिनेमाकी पाश्र्व गायिका सपना अवस्थीसँग सरसल्लाह गरेर अघि बढिरहेकी छु। आफ्नो पोर्टफोलियो बनाइरहेकी छु। हेरौं, कतिसम्म सफल भइन्छ।
आइटम डान्सर नै बन्ने ?
कलाकारको वर्ग हुँदैन। त्यो त भाग्य र निर्देशकले दिने भूमिकामा भर पर्ने कुरा हो।
लभ ब्रेक भएपछि काममा निकै सक्रिय हुनुभयो, प्रेमले कलाकारितालाई असर गर्दो रहेछ, हो ?
म ब्रेक भैसकेको प्रेमको कुरा गर्न चाहन्न। मैले यो विषयमा धेरै कुरा गरिसकें।
मैले प्रेमपछिको अवस्था जान्न चाहेको हो।
अँ फरक पर्दो रहेछ। अरूलाई टाइम दिनु नपर्ने, अरूको हस्तक्षेप सहनु नपर्ने जस्तो लाग्यो। मानिस जुन लाइफ बाँच्छ त्यसैमा रमाउनु पर्योि नि, होइन ?
तैपनि थाकेको बेला माया गर्ने मान्छेको आवश्यकता त परिहाल्छ नि, पर्दैन र ?
मेरा ४ जना कजन हुनुहुन्छ। मामा-माइजू तथा भाइहरूले पनि उत्तिकै प्रेम गर्छन्। प्रेम गर्न ब्याइफ्रेन्ड नै चाहिन्छ भन्ने रहेनछ।
ब्याइफ्रेन्डले गर्ने माया र अरुले गर्ने मायामा एउटै हो र ?
एउटै हो, केही फरक छैन। ब्याइफ्रेन्डले गर्ने माया विवाहपछिका लागि साँचौला नी, हुँदैन ?
तपाईंजस्ती खुला नायिकाले ब्याइफ्रेन्डको मायालाई विवाहपछि साँच्ने कुरा सुन्दा कतिले पत्याउलान् ?
जति सुकै खुला हुन खोजे पनि म बस्ने यहि नेपाली समाज हो। समाजले के भन्छ भन्दा पनि घर परिवारले के भन्छन् भन्ने कुरा मलाई महत्वपूर्ण लाग्छ। साप्ताहिक यति लोकपि्रय छ कि मेरो फ्यानहरूको हातमा मात्र पुग्दैन, मेरो घरभित्र पनि पुग्छ। साथीभाइसँग गर्ने कुरा र सार्वजनिक गर्ने कुरा फरक पार्नै पर्योो नि।
यो ग्लामरस जीवनपछिको भविष्यको कल्पना गर्नुहुन्छ ?
गर्छु नि। मलाई पनि एउटा हेन्डसम केटा होस्, जसले अब धेरै काम गर्यौंछ, विवाह गरेर बसौं भनोस् भन्ने लाग्छ। आखिर एक दिन त मैले चलचित्र छाड्नैपर्छ। अँ राम्रो कलाकार बन्ने सपना पूरा नभै चाहिँ विवाह गर्दिनँ।
« Reply #33 on: August 25, 2012, 02:17:10 AM »
रात बिताउन लाखको अफर आयो
Sushma's rate 1 lakh ??
« Reply #34 on: August 25, 2012, 02:27:04 AM »
हट एन्ड सिजलिङ सुष्मा
'उध्रेको चोली छ है तै पनि लाइन्छ...'
यो गीतले तीन जनालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्‍यायो। पहिलो चलचित्र 'लुट'का निर्माता, दोस्रो गायिका इन्दिरा जोशी र तेस्रो नृत्याङ्गना सुष्मा कार्की। लुटका निर्माता २७ लाखको चलचित्रले ४ करोडको व्यापार गरेपछि दंग परे। गायिका जोशी यही गीत गाउँदै देश-विदेशको सयरमा मग्न भइन्। नर्तकी सुष्मालाई त्यसपछि थुप्रै चलचित्रमा आइटम नृत्यका प्रस्ताव आए। कुनै सँग 'डिल' मिलेन भने कुनैले भनेजतिको पारिश्रमिक नदिने भएपछि उनले काम गरिनन्। 'उध्रेको चोली'ले बजार पिटेपछि सुष्मालाई आफ्नो चलचित्रमा 'आइटम डान्स' गराउन हो डबाजी नै चलिरहेको अवस्था थियो, तर एउटा गीतमा नाच्ने नर्तकीलाई चलचित्रकी मुख्य नायिकाको भन्दा बढी पारिश्रमिक दिनुपर्ने भएपछि धेरैजना पछि हटे।
लुटको निर्देशकको कौशल, सौगात मल्ल र दयाहाङ राईको अभिनय तथा उध्रेको चोली गीत र नृत्यका कारण चलचित्र चलेको हो भन्ने सुष्माले चलचित्रको छायांकनका बेलामा लापर्वाही गरिएको बताइन्। 'मैले उक्त गीतमा मात्र ३० हजार पारिश्रमिक लिएर नृत्य गरें। छायांकन हुने बेलासम्म पनि मैले लगाउने पहिरनको टुंगो थिएन। पहिरन आएपछि लगाएर हेर्दा ठूलो साइजको रहेछ अनि मैले त्यसलाई पिनअप गरेर म्यानेज गरेँ। गीत अनुसारको नृत्य निर्देशन पनि नहुँदा सोचेजस्तो परिणाम आएन। तैपनि दर्शकहरूले उक्त गीत मन पराउनुभयो, मलाई त्यसमै खुसी छ।' -उनले भनिन्। सुष्माले चारवटा चलचित्रमा आइटम डान्स गरिसकेकी छिन्, जिन्दगानी दर्पणछायाँ, औजार, मेरो लभस्टोरी र लुट।
त्यसैले पनि सुष्माको नामसँगै आइटम डान्सर भन्ने ट्याग जोडिएको छ। नृत्य आफ्नो लालसा भएको बताउने सुष्मालाई त्यो ट्याग भने मन परेको छैन। 'अन्य नेपाली नायिकाहरूले पनि त कुनै-कुनै चलचित्रमा आइटम डान्स गरेका छन्, उनीहरूको नामको अगाडि नायिका लेख्ने अनि मचाहिँ आइटम डान्सर ?' -चित्त नबुझेको कुरा गर्दै सुष्माले भनिन्। बलिउडमा ऐश्वर्या रायदेखि विद्या बालनसम्मका आधा दर्जन नायिकाको उदाहरण दिँदै उनले भनिन्- 'उनीहरू पनि त कुनै न कुनै चलचित्रमा आइटम गीतमा देखिएका छन्।'
'लुट' प्रदर्शन हुनुअगावै उनी नायिका भएका चलचित्र 'गुरुदक्षिणा' र 'के यो माया हो ?' आइसकेकाले पनि आफूलाई आइटम डान्सर ट्याट मात्र भिराउन नहुने उनको तर्क छ। 'खै त, लुटपछि मैले आइटम डान्स गरेकै छैन, बरु नायिका भएकी छु,' -उनले भनिन्। साँच्चै चोली उधारेपछि सुष्मा आफ्नो करियरमा आइटम डान्सरको छाप पर्ला कि भनेर डराएकी थिइन्, तर त्यसो भएन। अहिले उनी एकल नायिकाका रूपमा छाउँदै छिन्। उनको आगामी चलचित्र 'बिन्दास'को चर्चा चुलिएको छ। स्तनलाई दुई हातले च्यापेर उनले खिचाएको तस्बिर अंकित चलचित्रको पोस्टर अहिले चर्चाको शिखरमा छ।
अश्लील चलचित्रहरूको निर्माण बढेकाले त्यसको असर आफ्नो चलचित्रमा पनि पर्ने हो कि भन्ने पीर सुष्मामा पनि रहेछ। 'बिन्दासलाई पनि त्यही दृष्टिकोणले हेरिएको छ भन्ने सुनेकी छु। बिन्दासमा मेरो भूमिका सेक्सी छ, तर अश्लील होइन,' -उनले स्पष्ट पार्न खोजिन्। चलचित्रमा उनको एउटा बेडसिन निकै चर्चामा छ। उक्त बेडसिनको छायांकन हुँदा हेर्न नसकेर प्रोडक्सन म्यानेजर बेहोश भएको हल्ला बाहिर आयो। यहाँसम्म कि नायकले आफ्नो वासनामा नियन्त्रण राख्न औषधि नै सेवन गरेको तथा निर्देशकले कटभन्दा पनि सुष्माले नायकलाई नछाडेको जस्ता कुरा पनि सुनिए। 'चाहिनेभन्दा नचाहिने हल्ला हुने क्षेत्र भनेकै हाम्रो चलचित्र क्षेत्र हो। प्रोडक्सन म्यानेजरलाई अरू नै कुनै कारणले रिंगटा लागेको रहेछ। उक्त दृश्यका बेला निर्देशकले मलाई पूर्णरूपमा नग्न हुन भनेका थिए। मैले नेपाली चलचित्र बनाउन लागेको कि अश्लील चलचित्र भनेर कराएपछि बल्ल उनले सामान्य ढंगबाट उक्त दृश्य खिचाए। मैले यौनसम्पर्क गरेको भाव ल्याएर अभिनय मात्र गरेँ। अरू जति पनि कुरा सुनियो, ती बकवास हुन्,' -सुष्मा सफाइ दिने शैलीमा प्रस्तुत भइन्।
बर्दियाकी सुष्माका मामा हुन्, चलचित्र निर्माता प्रभुशमशेर राणा। काठमाडौंमा उनी मामाघरमै आश्रति छिन्। नृत्यमा रुचि भएकाले उनले नृत्यसँगै अभिनय क्षेत्रमा करियर बनाउने निधो गरिन्। आठ कक्षामा पढ्दापढ्दै फोटोग्राफर महेश प्रधानसँग खिचाएको तस्बिर साप्ताहिकको मध्यपृष्ठमा प्रकाशित भएपछि नै उनको करियरले 'ट्रयाक' समातेको हो । नेपाल वान टेलिभिजनको 'सलाम कलिउड' कार्यक्रमकी भिजे भएपछि उनले मामाकै चलचित्र 'मेरो एउटा साथी छ'मा सहनायिकाको भूमिका पाइन्। त्यसपछि उनले आफूलाई सीधै 'ग्ल्यामरस' रूपमा प्रस्तुत गर्न थालिन्। सुष्मा पत्रपत्रिका तथा वेबसाइटहरूका लागि 'हट फोटोसुट' गराउँदै अघि बढिन्। भलै चलचित्रमा उनी त्यत्तिको 'हट' रू पमा प्रस्तुत भइनन्, तर मिडियामा प्रकाशित उत्तेजक हाउभाउका तस्बिर नै पर्याप्त थिए, सुष्मालाई 'हट' देखाउन। आफूलाई अलग देखाउन गरेका फोटोसुटहरूमा परिवारले आपत्ती नजनाएपछि उनको आत्मविश्वास बढ्यो।
'मलाई परिवारका सबैको पूर्ण समर्थन छ। क्यामेरासामु म जे-जस्ती देखिन्छु, वास्तविक जीवनमा त्यस्ती छैन भन्ने उहाँहरूले बुझ्नुभएको छ,'-सुष्माले सुनाइन्।
चलचित्र क्षेत्रमा अहिले उनको 'हाई-हाई' छ। 'उध्रेको चोली'पछि 'बिन्दास'को चर्चाले उनलाई चर्चित बनाइरहेको छ। उनको 'सेक्सी अदा'का ' दिवाना'हरू निकै बढेका छन्। यद्यपि सुष्मा आफ्नो व्यक्तिगत लाइफ स्टाइलका कारण यदाकदा विवादमा आइरहन्छिन्- निर्देशक सुदर्शन थापासँग छ वर्षको प्रेमसम्बन्ध टुंग्याएर होस् वा मध्यरातसम्म रेस्टुराँ तथा क्लबमा मदिरा पिएर। सुदर्शनसँगको 'टपिक क्लियर' भैसकेकाले उक्त विषयमा उनी खासै बोल्न चाहिनन्। 'जति भन्नु थियो पहिले नै भनिसकेकी छु। अब त्यही कुरा फेरि कोट्याउनुको अर्थ छैन,' -उनले भनिन्। अबको ब्वाइफ्रेन्डका बारेमा जान्ने प्रयास पनि उनले मीठो ढंगले पन्छाइन्- 'मेरा बारेमा गसिप वा समाचार बन्ने कुरा सबैभन्दा पहिले तपाईंलाई नै जानकारी गराउँछु। अहिले म कसैसँग इन्गेज्ड छैन।' बल्ल सफलताको उकालो उक्लिरहेकीले केही समय त्यसको स्वादमा भुल्ने विचारका कारण विवाह गर्ने सोच पनि अहिले नबनेको उनले बताइन्। यौन अनुभवका मामिलामा उनले उल्टै प्रतिप्रश्न गरिन्- 'सबैले सोधे कै हुन्छन्। के यसको उत्तर दिनैपर्छ र ?
रातविरात घुम्ने र रेस्टुराँमा धुत्त भएर बस्ने आरोपमा भने सुष्माको 'टेम्पर' अलिक 'हाई' भयो। 'म मेरै परिवार र आफन्तहरूसँग मात्र बाहिर अबेरसम्म बसेकी छु। मलाई एक्लै राति धुत्त भए पिएको देखेको हल्ला गर्नेहरूले मसँग भएका मेरा आफन्तहरूलाई देख्नुभएनछ। त्यो पनि निकै अगाडिको कुरा हो, अहिले म काम नपरी राति बाहिर निस्कन्नँ। मेरो पिउने बानी छैन। यदाकदा घरमा सदस्यहरूसँग बसेर अलिकति लिएजस्तो मात्र गर्थें। अहिले त त्यो पनि बन्द गरिसकेकी छु।'
सुष्माले स्तनको उभारमा सूर्यको चित्रजस्तो लाग्ने रंगीन ट्याटु कुँदाएकी छिन्। सूर्य अर्थात तातो अर्थात् 'हट'। उक्त ट्याटुबाट उनले आफूलाई 'हट' साबित गर्न खोजेको बुझिन्छ। सुष्मा त्यसलाई बेग्लै ढंगबाट अथ्र्याउँछिन्- 'त्यो सूर्य होइन, तारा हो। त्यसको बीचमा गुलाफको फूल छ र त्यो मेरो हृदयको भागमा छ। यो ट्याटुले गुलाफको फूलजस्तो कोमल हृदय भएकी स्टार भन्ने संकेत दिन्छ।' उनले जस्तो अर्थ लगाए पनि त्यो ट्याटुले सुष्माको कामुकतालाई अझ बढाएको छ।
« Reply #35 on: August 26, 2012, 11:48:05 PM »
« Reply #36 on: October 09, 2012, 04:33:03 AM »
« Reply #37 on: October 26, 2012, 09:03:23 AM »
« Reply #38 on: November 07, 2012, 01:54:19 PM »
« Reply #39 on: November 07, 2012, 01:54:34 PM »